काठमाण्डौमा युवतीमाथि ए-सिड प्र’हार गर्ने ब्यक्तिले दिए यस्तो अचम्मको बयान, यसरी घटेको रहेछ घटना ! – Dainik Sangalo
July 24, 2020 687
काठमाडौँ — ‘कहाँसम्म जाने बहिनी, म मोटरसाइकलमा पुर्‍याइदिन्छु नि’ बिहीबार राति पौने ८ बजे रौतहट लक्ष्मीपुर घर भई डल्लुमा बस्दै आएका मोहम्मद आलमले दही र चिउरा किन्न निस्किएकी चिनेजानेकै एक युवतीलाई आग्रह गरे । ओखलढुंगाकी ती युवती र आलमबीच पुरानै चिनजान थियो ।
‘भैगो दाइ, म हिँडेरै जान्छु,’ युवतीले भनिन् । तर आलमले जिद्धि गरे । ‘किन हिँड्नुहुन्छ, म पुर्‍याइदिहाल्छु नि, बस्नुस न,’ आलमले यति भनेपछि युवती मोटरसाइकलको पछाडि बसिन् । केही मिनेटमै आलमले युवतीलाई बाफल चोकमा छोडिदिए । त्यही क्रममा आलमका कामदारले युवतीमाथि ए सिड छ र्किएर भा’गे । ए’सिड ती युवतीको गाला र निधारमा लाग्यो ।
आलमको डल्लुमा कवाडी पसल छ । एकजना भारत शिवरका युवक मुन्ना मोहम्मद आलमकै पसलकै कामदार । युवतीलाई बाफलमा छोडेर आलम मोहम्मदलाई लिन डल्लु फर्किए । मोटरसाइकलमा हालेर मोहम्मदलाई बाफलमा छोडिदिए । केही समयपछि आलम मानिसको आउजाउ छल्दै बाटोबाट छेउ लागेर बसे । केहीबेरमा किनमेल सकेर युवती बाफलबाट डल्लुतिर लागिन् । त्यही क्रममा आलमका कामदारले युवतीमाथि ए सिड छ’र्किएर भाुगे । ए सिड ती युवतीको गाला र निधारमा लाग्यो । आ गोले पो ले जसरी पी डा हुन थालेपछि युवती चि’च्याउँदै छ टप टिन थालिन् ।
युवतीमाथि ए सिड छ र्किएको पत्तो पाएपछि स्थानीयले तत्कालै नजिकै रहेको मनमोहन अस्पताल पुर्‍याए । तर त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनलाई कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल लगियो । घट-नाबारे प्रहरीले जानकारी पाइसकेको थियो । घा इते युवतीलाई अस्पताल पुर्‍याउँदा पौने ९ बजिसकेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डीआइजी विश्वराज पोखरेलले ‘आरो पितलाई जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्नू’ भन्ने आदेश महानगरीय अप राध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी श्याम ज्ञवालीलाई दिए । आलमले आफूले ती युवतीलाई मन पराएको तर उनले वास्तै नगरेपछि ए सिड हा’न्ने योजना बुनेको बयान दिएका छन् । ‘उनले रुपको सारै घ’मण्ड गरिन्, मैले मन पराउँथे तर कुनै मतलब नै गर्दिन थिइन्,
त्यहीबीच प्रहरीले बाफल चोकमा जडान गरिएको सीसीटीभी फुटेज निकाल्यो । अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएकी युवतीसँग सामान्य सोधपुछमा महाशाखा र परिसरको टोली लाग्यो । यता सीसीटिभी फुटेजमा शं’कास्पद व्यक्तिको हुलिया पत्ता लाग्यो । घ’टना हुनुभन्दा केही घण्टा अघिबाट युवतीको मोबाइलमा ३७ पटक मिसकल आएको रहेछ । त्यसमध्ये आधाजसो मिसकल आलमको मोबाइलबाट गरेको पत्ता लाग्यो । घ टनाका आ’रोपी पत्ता लगाउन प्रहरी नजिक पुगिसक्यो । त्यहीअनुसार पी डित युवतीसँग सोधपुछ गर्दा आलम आफ्नो दाइसमानको मान्छे भएको बताइन् । तर प्रहरी युवतीको बयानमा मात्रै सीमित थिएन ।
घटनालगत्तै वरिपरिका सबै गौंडा र सडक बन्द गरेर अनुसन्धान सुरु भइसकेको र साँझ परेकाले आ रोपित भाुग्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यहीबीच युुवतीको उपचार भइरहेकै बेला राति ११ बजे महाशाखा र परिसरको संयुक्त टोलीले ए सिड प्र हार गर्नेमध्येका एकजना भारतीय नागरिक मुन्ना महमदलाई नियुन्त्रणमा लियो ।
‘जुजुधौ दही र चिउरा लिएर कोठातर्फ जाँदै थिए, एउटा खैरो सर्ट र मुखमा मास्क लगाएको मानिस कुदेर म भएको ठाउँमा आयो, हातमा भएको बस्तु मेरो अनुहारमा फ्ँयाकेर भाग्यो,’ उनी देब्रे हातमा एसि ड छर्किने क्रममा छच ल्किएर नाडी र पाखुरामा पोलेको अवस्थामा भेटिए । उनलाई नियन्त्रणमा लिएलगत्तै आलमलाई पनि प्रहरीले पक्रा उ गर्‍यो । पक्राउपछि एसि ड प्र हार गर्ने महमदले ‘मैले त मालिकको आदेश मानेर ए सिड हान्न गएको हुँ, मलाई नै एसि ड लाग्यो, सारै पोले’को छ’ भन्दै प्रहरीलाई बयान दिए ।
महमद र एसि ड पी’डितको चिनजान छैन । आलमले आफूले ती युवतीलाई मन पराएको तर उनले वास्तै नगरेपछि ए सिड हा’न्ने योजना बुनेको बयान दिएका छन् । ‘उनले रुपको सारै घमण्ड गरिन्, मैले मन पराउँथे तर कुनै मतलब नै गर्दिन थिइन्,’ आलमले प्रहरीसँग बयानमा भनेका छन्, ‘रुपको घ मण्ड गर्न थालेपछि मलाई अ सह्य भएर ए सिड हान्ने योजना बनाएँ ।’ तर पी डित युवतीले आलमलाई दाजुसमान मान्ने गरेकोले कुनै मायाप्रेम नभएको बताएकी छिन् ।
आलमसँग त्यस्तो झैझ’गडा पनि कहिल्यै नभएको बताएकी छिन् । ती युवती राजधानीको एउटा तारे होटलमा अकाउन्टेन्टका रुपमा कार्यरत रहेको पनि खुलेको छ । ‘जुजुधौ दही र चिउरा लिएर कोठातर्फ जाँदै थिए, एउटा खैरो सर्ट र मुखमा मास्क लगाएको मानिस कुदेर म भएको ठाउँमा आयो, हातमा भएको बस्तु मेरो अनुहारमा फ्ँ याकेर भाग्यो,’ ती युवतीले प्रहरीलाई भनेकी छन्, ‘मेरो कसैसँग झग’डा पनि परेको थिएन, तर त्यो मानिस म पसलमा जाँदा परबाट नियालिरहेको थियो ।’
एसएसपी थापाका ए सिड हाुन्नेमाथि अनुसन्धान गरी मु द्दा चलाउन महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूको जिम्मा लगाइएको बताए । ए सिड प्रहारपछि प्रहरीले निकै दबा बमा काम गरेर नै अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको उनले बताए । ‘हामी घटनापछि निकै दबा बमा थियौं,’ थापाले भने, ‘तर परिसर र महाशाखाको संयुक्त प्रयासमा घट ना घटेको ३ घण्टाभित्रै अभियुक्तलाई प क्राउ गर्न सम्भव भयो ।’
यसअघि २०७६ भदौमा विद्यालय जाने क्रममा वीरगन्जमा १५ वर्षीया मुस्कान खातुनमाथि एसि ड प्र हार भएको थियो । त्यसअघि २०७६ जेठ २ गते राजधानीको कालोपुलमा राति ८ बजे दोलखाका विष्णु भुजेलले आफ्नै श्रीमती जेनी खड्कामाथि ए सिड गरेका थिए । ६ वर्षअघि वसन्तपुरमा जीवन विकले दुई युवतीमाथि ए सिड प्र हार गरेका थिए । २०७१ चैतमा ए सिड हा’न्ने विकलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा प क्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो । ए सिड प्रहा रका घट ना अन्य जिल्लामा पनि बर्सेनि दोहोरिने गरेको छ । कतिपय घ टनामा मायाप्रेम अस्वीकार गर्दा र कतिपयमा आपसी झग’डाका कारण यस्ता घ’टना भएको देखिएका छन् । यो खबर मातृका दाहालले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
Prevपोखरीमा डुवेर तीन बालकको एकैपटक निधन, गाउँनै शोकमा
Nextअदभूत स्मरण शक्तिका विजय शाहीको अन्तिम अन्तर्वार्ता : रुदै देखाए ज्यान मा’र्ने ध’म्किको म्यासेज, पुण्यको नामनै नलिनुस् (भिडियो)
विद्युत प्राधिकरणमा फेरि कुलमान घिसिङ नै ल्याउँछौं : वर्षमान पुन
भारतलाई जवाफ : कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालको हो, नेपाली रोकिँदैनन्
कल्पनाको खुल्यो रहस्य अहिले सम्म ३ विवाह,कृष्णले ५० लाख र विवाहमा दबाब दिदा यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुहोस)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (69529)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (55502)